Duqa Muqdisho & Guddiga diyaarinta xeerka dhameystirka Sharciga Doorashoyinka oo kulmey – Kalfadhi
Duqa Muqdisho & Guddiga diyaarinta xeerka dhameystirka Sharciga Doorashoyinka oo kulmey
Guddoonka guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerka dhamaystirka sharciga Doorashoyinka, ayaa shalay magaalada Mogadishu kula kulmay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) iyo guddoomiye kuxigeenka dhinaca Amniga Maxamed Cabdullaahi tuulax.
“Waxaan kulan muhiim ah la qaadanay Guddoonka guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerka dhamaystirka sharciga Doorashoyinka qaranka,waxaan kawada hadalnay muhiimada ay lee dahay in la da’dajiyo dhameestirka xeerka sharciga doorashooyink iyo in dalka uu ka dhaco doorasha qof iyo cod ah ayuu yiri Guddoomiye Filish.
Dhinaca kale guddoomiye kuxigeenka dhinaca Amniga Maxamed Cabdullaahi tuulax ayaa la kulmey Guddoonka guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerka dhamaystirka sharciga Doorashoyinka,iyaga oo ka wada hadley arrimo dhowr ah.
Si lamid ah guddoomiye Tuulax ayaa sheegay in Gudiga ay ka wada hadleen muhiimada ay lee dahay in la da’dajiyo dhameestirka xeerka sharciga doorashooyinka qaranka iyo in dalka uu ka dhaco doorasha qof iyo cod ah oo ay u madax banaan yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed si loo gaaro hadafka la hiigsanayo.
Maalin ka hor, Guddiga-Wadajirka ah ee Diyaarinta Xeerarka Dhammaystirka Sharciga Doorashooyinka Qaranka ayaa gellinkii dambe ee shalay kulan la qaatay safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Belanga iyo safiirka dalka Talyaaniga ee Soomaaliya Alberto.
Guddoomiyaha Guddiga mudane Xil. Ibraahim Isaaq Yarow, oo hoggaaminayay kulanka ayaa intii uu socday waxaa ay ka wada hadleen halka ay mareyso diyaarinta xeerarka dhammeystirka sharciga Doorashooyinka, iyo muhiimadda ay leedahay in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho laga-wada qeyb-gallo.
Madaxweyne Farmaajo oo cambaareeyay dagaal-beelledyo ay ku dhinteen 10 qof
Xasan Sheekh oo boggaadiyay dib-u-heshiisiinta Galmudug